Free Thinker: ခရစ္စတိုဖာ ပေါက်ကျိုင်း ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၂)
ဒုတိယပိုင်း (စင်ကာပူအတွေ့အကြုံ - ပထမ ၂ နှစ်)
(၅) စင်ကာပူသို့ ရောက်ရှိခြင်း
လေယာဉ်ကြီး လေပေါ်ပျံတက်ရန် ပြေးလမ်းပေါ်တွင်အရှိန်ယူကာ တအားစ’ ပြေးလိုက်သည်နှင့် ရင်ထဲတွင်လှပ်ကနဲ ဖြစ်သွားကာ မဖော်ပြနိုင်သော ဝေဒနာတစ်ရပ်ကို ခံစားလိုက်ရပါသည်။ သည်ဝေဒနာမျိုးကို မိသားစုနှင့်ခွဲခွာကာ နိုင်ငံခြားသို့ ယခုမှစတင်ထွက်ခွာလာသူ တိုင်း ခံစားရလိမ့်မည် ထင်ပါသည်။ တဖြည်းဖြည်း ဝေးကျန်ရစ်ခဲ့သော ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို လေယာဉ်ပေါ်မှစီးကြည့်ရင်း ၀မ်းနည်းသလိုလို ခံစားမိပါသည်။ ထိုနေ့ထိုရက်မှစကာ ငါတို့မိသားစုနဲ့ ပြန်တွေ့ဘို့ ဘယ်နှရက်လိုသေးတယ် ဆိုသည်ကို နေ့တိုင်းတွက်မိပါတော့၏။
သင်္ဘောကျင်းတွင် အလုပ်လုပ်နေရင်းလည်း ကောင်းကင်တွင် ဖြတ်ပျံသွားသော လေယာဉ်တစ်စီးတလေကို မြင်ရတိုင်း မြန်မာပြည်ကို လွမ်းဆွတ်စိတ်များ ပေါ်မိပါသည်။ နက်ဖြန် အိမ်ပြန်ရမဲ့နေ့ဆို ဒီနေ့ဘယ်လောက် ပျော်ဘို့ကောင်းလိုက်မလဲ ဟုလည်း မကြာခဏ တွေးမိ၏။ သို့သော် ဤသည်မှာ စင်ကာပူရောက်ခါစ နှစ်များသာဖြစ်ပြီး ယခုတော့လည်း ရိုးသွားသဖြင့် သိပ်အထွေအထူး မခံစားမိတော့ပါ။ မြန်မာပြည်မှ မိသားစုထံပြန်ရသည်ကို ခဏအလည်သွားသကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ မြန်မာပြည်မှ စင်ကာပူသို့ပြန်လာမှ မိမိနေရပ်သို့ ပြန်လာရသကဲ့သို့လည်းကောင်း ကပြောင်းပြိ၊ ကပြောင်းပြန် ခံစားရပါသည်။
ခုမှသာ အနေကြာလို့ရိုးသွားရမည်။ ရောက်စကတော့ စင်ကာပူဆိုတာ အလွန်ထူးဆန်းသော၊ ခမ်းနားသော၊ လှပသောမြို့ကြီး ဖြစ်သည်။ လမ်းကြီးတွေကလည်း ကောင်း၊ ကားတွေကလည်း အသစ်၊ လူတွေကြည့်လိုက်လျှင်လည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကလူတွေလို ခပ်စုတ် စုတ်ကလေးတွေ မဟုတ်။ တောက်လို့ပြောင်လို့။ သစ်သစ်လွင်လွင်၊ ကြော့ကြော့မော့မော့။ ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်။ အရာရာ အထူး အဆန်းတွေချည်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ အယောက် (၂၀) ပါ လူစုကို လေဆိပ်တွင် ကုမ္ပဏီမှ လာကြိုနေသည်။ လာကြိုသောလော်ရီကားဖြင့်ပင် သူတို့ခေါ် ရာ လိုက်ခဲ့ကြသည်။ ပထမဆုံးနေရသည်မှာ Yishun တွင် ဖြစ်၏။ Sembawang Road ပေါ်က နှစ်ထပ်အိမ်ကလေးတစ်လုံး၏ အပေါ်ထပ် တွင်ဖြစ်သည်။ အောက်ထပ်တွင် စားသောက်ဆိုင်ရှိသည်။ ကုန်စုံဆိုင်ကလေးလည်း ရှိသဖြင့် စားရေးသောက်ရေး အဆင်ပြေပါသည်။
လော်ရီပေါ်က ဆင်းကြတော့ အသက်ခပ်ကြီးကြီး လူကြီးနှစ်ဦးမှာ ကျွန်တော့် luggage ကို အတင်းထမ်းပြေးပါသည်။ ကျွန်တော် လည်း ဘုမသိ၊ ဘမသိနှင့် သူတို့နောက် ရောယောင်လိုက်ခဲ့၏။ အိမ်ခန်းမှာ အိပ်ခန်းသုံးခန်း ပါသည်။ အခန်းများမှာ အတော်ကျဉ်းပါသည်။ ကုတင်သုံးလုံးကို နံရံသုံးဘက်တွင် ကပ်ထားပါသည်။ အခန်းအလယ်တွင် ကွက်လပ်တစ်ခုရှိရာ ထိုကွက်လပ်သည်ကား ကျွန်တော်တို့၏ ထမင်းစားရာ၊ အပန်းဖြေရာ၊ ခေတ္တခဏထိုင်လိုကထိုင်ရာ မျိုးစုံသုံးနေရာပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
တစ်ခန်းကို နှစ်ထပ်ကုတင်သုံးလုံး ဆိုတော့ သုံးခန်းတွင် ၁၈ ယောက်။ ကျန်သည့် နှစ်ယောက်ကိုတော့ အိမ်သာအနီးရှိ စတိုခန်း တွင် နှစ်ထပ်ကုတင်တစ်လုံးနှင့် နေရာချပေးပါသည်။ တစ်ခန်းကို ၆ ယောက်နေရမည်ဆိုတော့ ကိုယ်နှင့်စရိုက်ချင်း တူရာတူရာ နေချင်ကြ သည်ပေါ့။ သည်တွင် အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား သူတို့မှာ ကိုယ်နှင့်စရိုက်တူမည်ထင်သည့် သူများရှိရာ အခန်းများတွင် နေရာယူကြပါသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ အခြေအနေကို အသာအကဲခတ်နေပါသည်။ ကျွန်တော် ကိုယ့်နေရာကိုယ် ဦးစရာမလို။ ခုနင်က ကျွန်တော့်သေတ္တာကို ထမ်းပြေးသွားသူ လူကြီးနှစ်ဦးက ကျွန်တော့်ကို နေရာချပေးပါသည်။
နောက်မှသိရသည်မှာ ထိုသူနှစ်ဦးမှာ ဦးဘကျော်နှင့် ဦးမြင့်လွင် ဖြစ်၏။ ယခုလာသော အသုတ်ထဲမှ လူတချို့ကို သူတို့သိသည်။ ထိုသူတို့နှင့် တစ်ခန်းထည်းကျမှာ အလွန်ကြောက်သည်။ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်တွင် လေယာဉ်စောင့်နေကြစဉ်က ကျွန်တော်သူတို့ကို အကဲ ခတ်နေသလို ကျွန်တော့်ကိုလည်း ထိုသူနှစ်ဦးမှ တစေ့တစောင်းအကဲခတ် နေပါသည်။ ဒီလူ့ကြည့်ရတာ ခပ်အေးအေးနေမဲ့ပုံဘဲ၊ ငါတို့ သူနဲ့ အတူနေရအောင် ဟု ရန်ကုန်ကတည်းက တိုင်ပင်လာကာ စင်ကာပူလည်းရောက်ရော ကျွန်တော့်ကို သူတို့နေမည့် အခန်းတွင်း အတင်း ဆွဲသွင်းကြခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
ရောက်ပြီး ပစ္စည်းပစ္စယများ နေရာချအပြီး အောက်ဆင်းလျှက် ထမင်းစားကြပါသည်။ ကျွန်တော်က မမှာတတ်။ ယခင်က စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသူ ကိုထိန်လင်းက မလေးလိုလည်းပြောတတ်သည်နှင့် မှာပေးပါသည်။ သို့သော် ထမင်းကို အကုန်မစား လိုက်ရ။ ထမင်းစားနေရင်းတန်းလန်း၊ ရေသောက်ချင်လာသည်နှင့် ထပြီးရေဗူးသွားဝယ်နေတုံး ထမင်းပန်းကန်ကို လာသိမ်းသွား၏။ တစ်ဝက်တပျက်နှင့် ၀ လိုက်ရသည်။ ထမင်းတစ်ပွဲ ၂ ကျပ်ခွဲ ဆိုတော့ အင်း၊ မဆိုးဘူးဟ ဟု တွေးမိသည်။
ရောက်ပြီးများမကြာမီပင် အိုဗာဟောကြီးဝတ်လျှက် သူဌေးရောက်လာပါသည်။ သုံးစွဲဘို့ တစ်ဦးလျှင် ၅၀ စီ ထုတ်ပေး၏။ လခထုတ်တော့ ပြန်ဖြတ်မည်ပေါ့။ ဘာတွေလိုသလဲ ၀ိုင်းဝန်းပြောကြဆိုကြရင်း ကျွန်တော့်မှာ အလိုလိုနေရင်း ထန်းတက်လက်မှတ် ရလာ ပါသည်။ ဟိုလူက ကျွန်တော့် ကုတင်မှာ ဘာဖြစ်နေလို့ ပြောပေးပါဦး ဆို သွားပြောလိုက်။ မီးဖိုချောင်ကလည်း ဘာလဲမရှိဘူး၊ ပြောပေးပါဦး ဆို သွားပြောလိုက်။ သုံးလေးဦးကို ပြောပေးအပြီး ကျွန်တော့်မှာ သူဌေး၏ အဟောက်ကိုခံရပါတော့သည်။ ထိုအခါမှ အင်း၊ ဟောက်တာ တောင် နည်းသေးဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိပြုမိပါတော့၏။
ကျွန်တော်တို့ ဤအိမ်တွင်နေစဉ် အိမ်အောက်ထပ် ကုန်စုံဆိုင်မှ အဘွားကြီးက ကျွန်တော်တို့စားဘို့ ပဲပင်ပေါက်များ၊ ခရုများ၊ ဂုံးများ၊ ပိန္နဲသီးများ၊ ဟင်းနုနွယ်များ စသည်ဖြင့် မကြာခဏ လာ လာပေးပါသည်။ အမေကြီးကို အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သူတို့ပြောလို့ သိရသည်မှာ Keppel Shipyard တွင် လုပ်ရမည် ဆို၏။ အဆင်မပြေစရာတော့ ဘာမှမရှိပါ။ မနက် ၅ နာရီခွဲ အိပ်ယာမှထ။ မနက်စာစားစရာရှိလျှင် စား။ နေ့လည်စာဘို့ ထမင်းထုပ်။ အ၀တ်အစားလဲ။ လိုတာယူ။ ၆ နာရီခွဲသည်နှင့် အောက်မှာလာ စောင့်နေသော လော်ရီကားကလေးမှာ စထွက်ပါသည်။ မထွက်လို့လည်းမဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့နေသော Yishun နှင့် Keppel Shipyard မှာ နာရီဝက်ခန့် မောင်းရသည်။ ၇ နာရီခွဲ ဒေါင်ကနဲထိုးသည်နှင့် ဂိတ်ပိတ်ပါသည်။ တစ်မိနစ်မှ စွန်းလို့မရ။ အလုပ်လာကြသူ ရာပေါင်းများစွာမှာ ဂိတ်ပေါက်တစ်ခုထဲ တိုးဝှေ့ဝင်နေကြရာ နောက်ကျလျှင် ၀င်လို့ရတော့မည် မဟုတ်။
(၆) Safety သင်တန်းများ တက်ရခြင်း
စင်ကာပူရောက်ရောက်ချင်း အလုပ်လုပ်လို့မရသေး။ SOC (Safety Orientation Course ) ဆိုတာ တက်ရသည်။ စင်ကာပူ ရောက်လာသူမှန်သမျှ လုပ်ငန်းခွင်မ၀င်မီ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် SOC တက်ရသည်။ သင်္ဘောကျင်း တွင် လုပ်မည့်သူများက Marine, ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်မည့်သူများက Construction, ဓါတုဗေဒစက်ရုံများ တွင် လုပ်မည့်သူများက Oil and Petrochemical, ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ စက်ရုံများတွင်လုပ်မည့်သူများက Manufacturing စသဖြင့် ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ သင်တန်းများ တက်ရသည်။
သင်တန်းကတော့ တစ်ရက်မျှသာ ဖြစ်ပါ၏။ နံနက် ၈ နာရီခန့်တွင် သင်တန်းစသည်။ Slide presentation များ၊ ဗီဒီယိုများဖြင့် ရှင်းလင်းပြသကာ ညနေ ၄ နာရီလောက်တွင် စာမေးပွဲ ဖြေရပါသည်။ အမှန်ဆိုရလျှင် မေးခွန်းများမှာ ဘာမှ မခက်ပါ။ မှားမှန်ရောထွေး၊ အမှန်ရွေး (MCQ – Multiple Choice Question) ဖြစ်၏။ သို့သော် ပြဿနာက အင်္ဂလိပ်စာ ဖြစ်၏။ အင်္ဂလိပ်စာတတ်သူများအဖို့ မထောင်းတာလှ။ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေကာ အောင်မည်။ သို့သော် အင်္ဂလိပ်လိုမတတ်လျှင်မူ အောင်ဘို့ခဲယဉ်းမည်။ တစ်ခါဖြေလို့ မအောင် လျှင် နောက်တစ်ခါထပ်ဖြေ။ သုံးခါဖြေလို့မှ မအောင်လျှင် work permit ထုတ်မပေး။ နေရပ်သို့ ပြန်လွှတ်မည်။ SOC မအောင်သဖြင့် မြန်မာ ပြည် ပြန်သွားရသူများ ရှိပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ပြန်ရလျှင် အလုပ်ရှင်ရော၊ အလုပ်သမားပါ နစ်နာပါသည်။ မိမိအလုပ်သမားတစ်ဦး SOC ကျကာ ပြန်အလွှတ်ခံရလျှင် ထိုအလုပ်ရှင်အဖို့ နောက်ထပ် ၆ လအတွင်း အလုပ်သမားထပ်ခေါ်ခွင့် မရှိပါ။ သို့အတွက် စင်ကာပူလာပြီး အလုပ် လုပ်ချင်သူများအဖို့ အင်္ဂလိပ်စာကို အတတ်ကြီးမဟုတ်သည့်တိုင်၊ သေစာရှင်စာလောက်တော့ တတ်ထားရမည် ဖြစ်သည်။ မဟုတ်ပါက နွားရောင်းလိုရောင်း၊ ရွှေပေါင်လိုပေါင်ဖြင့် ရင်းလာခဲ့သော အေးဂျင့်ဖီးအားလုံး ဆုံးမည်။
SOC တက်ရုံမျှနှင့် မပြီးသေး။ ထိုသင်တန်းတက်ပြီးသူများအား Keppel Shipyard တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် SIC (Safety Induction Course) တက်ရပြန်ပါသေးသည်။ SOC နှင့် SIC ဘာကွာသနည်း ဆိုသော် SOC က စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်လျှင် ဒါတွေ ဒါတွေ လိုက်နာရမည်။ ဒါတွေဒါတွေ မလုပ်ရ။ ဒါတွေ ၀တ်ရ၊ ဆင်ရမည် စသည်တို့ကို ရှင်းလင်းပြောပြသည်။ Shipyard SOC တွင် သင်ပေးသော ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှာ စင်ကာပူတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ သင်္ဘောကျင်းများအတွက် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ SOC ကို MOM (Ministry of Manpower) ကပေးသည်။
SIC ကတော့ သင်္ဘောကျင်းတွင် အလုပ်လုပ်သည့်အခါ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြစ်သည်။ SIC ကိုမူ သက်ဆိုင်ရာ သင်္ဘောကျင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ စက်ရုံစသည်တို့က သင်တန်းပေးသည်။ သင်္ဘောကျင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများမှာ မတူသဖြင့် သင်္ဘောကျင်းတစ်ခုသို့သွားတိုင်း ထိုသင်္ဘောကျင်းကပေးသော SIC ကိုတက်ရသည်။ Safety ဌာနက SIC တက်ပြီးသူများစာရင်းကို Security ဂိတ်သို့ပေးလိုက်သည်။ လုံခြုံရေးဂိတ်ဝက စစ်ဆေးပြီး ထိုစာရင်း တွင်ပါသူများကိုသာ သင်္ဘောကျင်း အတွင်း အလုပ်လုပ်ရန် ၀င်ခွင့်ပေး သည်။ ထိုသင်တန်းမတက်ထားသူတို့အဖို့ သင်္ဘောကျင်းအတွင်း ၀င်ခွင့် ရချင်တော့ရမည်။ သို့သော် အလုပ်လုပ်လို့မရ။ အထူးသဖြင့် သင်္ဘောပေါ်တက်လို့မရ။
ဤနေရာတွင် အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာသဖြင့် SIC တွင် မေးတတ်သည့်မေးခွန်းအချို့ကို ဖော်ကောင်လုပ်ချင်ပါသည်။ လေ့လာလို သူများ လေ့လာလို့ရအောင် ဖြစ်ပါ၏။ သို့သော် သည်မေးခွန်းကို သည်အတိုင်းမေးလာမည်ဟုတော့ တရားသေမှတ်မထားပါလေနှင့်။
1. When is fall protection needed? Give some example.
2. Beside provision of scaffolding, what are the other method/system of guarding against fall from height?
3. Guardrails must be provided at working platform of more than ____ m in height.
4. What PPE must you wear for full protection at height?
5. Which of these hazards are associated with gas welding and cutting?
0 Fires and explosions
0 Burns and heat stress
0 Sprains and backache
0 Eye damage
6. Which of the following hazard is not associated with welding?
0 Poisoning from toxic gases and fumes
0 Sprains and cuts
7. What do you do if you haveaload that is too heavy to lift on your own?
0 Leave it for someone else
0 Break up the load, if possible
0 Get someone to help you
0 Useamechanical aid
8. Forklift must be operated by competent forklift operator
0 InstallaPUB approved Earth leakage Circuit Breaker (ELCB) and test it only after use.
0 Always engagealicensed electrical contractor to do your wiring
0 Do not overloadasocket outlet by connecting several appliances using multi ways adaptors
0 Send any damaged or defective electrical equipment or appliance to the authorized agent or competent repairer for repair.
10. Noise can be controlled by the method of:
0 Administration controls
0 Personal protective equipment
11. The acceptable noise level under TWA is
0 85db(A) for 8 hours continuous.
0 90 dB(A) for 8 hours continuous
0 120 dB(A) for 8 hours continuous
0 180 dB(A) for 8 hours continuous
12. Which of the following are you allowed to wear at work as eye protection?
0 Safety glasses with sideguards
0 Face shields
0 Prescription safety glasses
13. Which of the glove should be worn when handling hazardous substances?
0 Impervious Rubber Gloves
0 Cotton Gloves
0 Surgeon Gloves
0 Leather Gloves
သင်္ဘောကျင်းအတွင်း ၀င်သူတိုင်း ဂိတ်ဝတွင် pass လဲရသည်။ မိမိ၏ work permit card ကို ဂိတ်သို့ပေးလိုက်ရပြီး သူတို့က ၀င်ခွင့်ကဒ်ပြားများ ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ သင်္ဘောကျင်းမှ ပြန်အထွက်တွင် ထိုကဒ်ကို မိမိ၏ work permit card နှင့်ပြန်လဲယူရသည်။ ပြဿနာမှာ လူအနည်းအကျဉ်းဆို ကိစ္စမရှိ။ သင်္ဘောကျင်းသို့ အလုပ်လုပ်ရန်လာသူ။ အလုပ်ပြီး၍ သင်္ဘောကျင်းမှ ပြန်ထွက်သူများမှာ တစ်ချိန်ထဲတွင် စုပြုံလာကြသည်ဖြစ်ရာ ထောင်နှင့်ချီသော လူများတန်းစီတိုးဝှေ့နေကြသဖြင့် ထိုလူအုပ်ကြီးကို ရှင်းထုတ်ရန် လုံခြုံရေး အစောင့်များမှာ ကဒ်များကို စက်သေနတ်ပစ်သလို လဲပေးနေရ၏။
ထိုအခါ တစ်ခါတစ်ရံ ကဒ်များမှားပေးတတ်သည်။ ကဒ်လက်ထဲရောက်လာသည်နှင့် ထိုကဒ်မှာ မိမိကဒ် ဟုတ်မဟုတ် သေသေချာချာကြည့်ရန် လိုပါသည်။ သို့မှ ကဒ်မှားလာလျှင် ချက်ခြင်း ပြန်ပြောလို့ရမည်။ နောက်နေ့သို့ရွေ့သွားလျှင် ရှာရမလွယ်။ ရွာများ လယ်ပါသည်။
သင်္ဘောကျင်းဟူသည် နေရာကျဉ်းကျဉ်း၌ လူအများစုပြုံလုပ်နေကြသည်ဖြစ်ရာ အန္တရာယ်များပါသည်။ သတိထားနိုင်မှ တော်ရုံကျ မည်။ ဖြစ်လာလျှင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ခံရမည်။ သူတို့က ဘာမှလုပ်ပေးမည် မဟုတ်။ အာမခံတွေဘာတွေ ကနောက်။ ကိုယ်ခံရမှာက အရင်။ ဒါ အလကားပြောနေတာ မဟုတ်ပါ။ သင်္ဘောကျင်းတွင် မကြာခဏ လူသေတတ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အမြင့်မှ ပြုတ်ကျသဖြင့် သေသည်။ ဓါတ်လိုက်လို့သေသည်။ မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီး သေသည်။ အလုံပိတ်အခန်းအတွင်း ဓါတ်ငွေ့များ ရှုမိသဖြင့် သေသည်။ အကြောင်းမျိုးစုံဖြင့် သေဘို့လမ်းနီးသည်။ သတိထားပါ။
(၇) Keppel Shipyard တွင် အလုပ်လုပ်ရခြင်း
Keppel Shipyard သည် 51 Pioneer Sector 1 ၌ရှိ၏။ Tuas, Benoi နှင့် Gul သင်္ဘောကျင်းသုံးခုကိုပေါင်းကာ Repair (သင်္ဘော အငယ်စား၊ အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း)၊ Modification (သင်္ဘောသက်တမ်းတိုးခြင်း၊ အလျားဆန့်ထုတ်ခြင်း၊ ကိုယ်ထည်ကို ပြင်ဆင် ခြင်း စသည်)၊ Conversion (သာမန်ရေနံတင် Tanker သင်္ဘောကြီးများကို ရေနံထုတ်၊ သိုလှောင်၊ ပို့ဆောင်သော FPSO – Floating Production Storage and Offloading သင်္ဘောကြီးများအဖြစ်ပြောင်းပေးခြင်း၊ FSO, FSRU သင်္ဘောများအဖြစ် ပြောင်းပေးခြင်း စသည်) တို့လုပ်သည်။
သင်္ဘောကျင်းအကျယ် ၁၀၆ ဧက ရှိ၏။ အရှည် မီတာ ၃၅၀ (၃၈၂ကိုက်)၊ အကျယ် ၆၆ မီတာ (၇၂ ကိုက်) ရှိ Tuas dock, အရှည် ၃၅၅ မီတာ (၃၈၈ကိုက်)၊ အကျယ် ၆၀ မီတာ (၆၅ ကိုက်) ရှိ Raffles dock, အရှည် မီတာ ၃၀၁ (၃၂၉ ကိုက်)၊ အကျယ် ၅၂ မီတာ (၅၆ ကိုက်) ရှိ Temasek dock ဟု Dry Dock သုံးခုရှိသည်။ Keppel inhouse contractor များ၏ ရုံးခန်းများမှာ Raffles dock အနီးတွင် ရှိရာ ကျွန်တော်တို့ ရုံးခန်းမှာ ထို dock ကြီး၏ ရှေ့တည့်တည့်တွင် ရှိပါသည်။
သင်္ဘောများပြင်ဆင်ရန်အတွက် ဆိုက်ကပ်ရပ်နားနိုင်သော Berthing Space ၈ ခုရှိသည်။ ထိုနေရာများတွင် ပြင်ဆင်ရန် ဆိုက်ကပ်ထားလျှင် နေ့အလိုက်ဆိုက်ကပ်ကြေးပေးရရာ ထိုကြေးမှာလည်း မသေးလှပါပေ။ ထို့အတွက် သင်္ဘော owner ဘက်မှ သင်္ဘော ပြင်မည့်လုပ်ငန်းများကို သင်္ဘောကျင်းနှင့် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်ပါ ရက်အကန့်အသတ်အတွင်း ပြီးစီးနိုင်ရန် အတင်းတွန်းအားပေးတတ် ပါသည်။ သို့အတွက် ကျွန်တော်တို့မှာ ရက်စေ့ခါနီးလာလေ၊ အလုပ်များပူလာလေ ဖြစ်တတ်ရာ နောက်မှ ကျားလိုက်လာသလို လုပ်ကြရ တတ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ သင်္ဘောကျင်းများအဖို့တော့ မဆန်းတော့ပါ။
စင်ကာပူတွင် ကျွန်တော်နှင့် ပထမဦးဆုံး ဖူးစာဆုံရသော ကုမ္ပဏီမှာ Tellus Marine Engineering ဖြစ်ပါသည်။ သူဌေးမှာ တရုတ်ဖြစ်ပြီး Mr. Tay Huat Him ဟု ခေါ်ပါသည်။ (စာလုံးပေါင်းတော့ မှန်ချင်မှမှန်ပါလိမ့်မည်။) သူ့ကို Mr. Tay ဟု ခေါ်လိုခေါ်၊ Ah Huat ဟု ခေါ်လိုခေါ်၊ ခေါ်ကြပါသည်။ သည်တုံးက ရုံးဝန်ထမ်းအင်အားလည်း သိပ်မများလှသေး။ ရှိသည့်သူများမှာလည်း သူဌေး၏ ဆွေမျိုးများ သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ - သူဌေး၏ လက်ထောက်ဖြစ်သူမှာ သူ့တူ Ah Wee ဖြစ်၏။ စာရင်းကိုင်မှာ Ah Wee ၏ မိန်းမဖြစ်ပါသည်။ နောက် စာရင်းကိုင်တစ်ဦး ဖြစ်သူတစ်ဦးမှာ မိန်းမလျာလိုလို၊ ဘာလိုလို။ သို့သော် သူ့တွင် မိန်းမနှင့် ကလေးနှင့်။ သူက ကျွန်တော့်ကို အလွန်ခင်ပါ သည်။ ကျွန်တော်က ကျောင်းဆရာလူထွက်ဆိုတော့ လေးလေးစားစားလည်း ဆက်ဆံပါသည်။ သူ့နာမည်မှာ ကျီကယောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဘယ်လိုစာလုံးပေါင်း သလဲတော့ မပြောတတ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရောက်သည့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီမှာသိပ်မကြီးသေး။ ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ အလွန်ဆုံး ၀န်ထမ်းအင်အား စုစုပေါင်း ၁၀၀ ထက် မပိုပါ။ ၇၀ - ၈၀ လောက်သာ ရှိပါလိမ့်မည်။ မြန်မာများအနေနှင့်မူ ကျွန်တော်တို့မှာ ပထမဆုံးအသုတ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာများကို အယောက် ၂၀ လျှင် တစ်သုတ်ကျ ခေါ်ယူရာနောက်ပိုင်း မြန်မာ လေးငါးရာထိ ဖြစ်လာ ပါသည်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအင်အားလည်း ၁၀၀၀ နီးပါးထိ တိုးတက်လာပါသည်။
အလုပ်သမားများ၏ စာရင်းကိုကိုင်ရသူ (time keeper) မှာ လော်ဂန် ဆိုသူ အိန္ဒိယကုလားကလေး ဖြစ်ပါသည်။ မန်နေဂျာ ဆိုသူမှာလည်း ကုလားပင် ဖြစ်ပါသည်။ မာလာ ဟု ခေါ်၏။ အင်မတန်လည်သော ကုလားဖြစ်ပါသည်။ ဖိုမင်များအနေနှင့် Zol, Shanker, Hanafi, ပွေကျား (Gho Seng Lai) စသည့် လေးငါးဦးမျှသာ ရှိ၏။
Tellus Marine Engineering က ပိုက်လုပ်ငန်း (piping) လုပ်သည်။ သို့အတွက် ယခင်က နာမည်ဟောင်းမှာ Tellus Marine Piping ဖြစ်၏။ ယခုတိုင် အချို့သောပစ္စည်းများတွင် TMP ဟု စာတမ်းများထိုးထားတာ တွေ့ရပါသေးသည်။ ယခုမှ Tellus Marine Engineering ဟု နာမည်ပြောင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ ထို့ပြင် သူတို့နှင့် ညီအစ်ကိုတော်ကုမ္ပဏီ Tellus Engineering Construction ဆိုတာလည်း ရုံးခန်းချင်း ကပ်လျှက်တွင် ရှိပါသေးသည်။ ယခင်က အတူတူ။ ယခုမှ ခွဲထွက်သွားတာဟု သိရပါသည်။ သူတို့ကတော့ Steel Work (သင်္ဘောကိုယ်ထည်ပိုင်းဆိုင်ရာ) လုပ်၏။ ထိုကုမ္ပဏီတွင်လည်း ရွှေမြန်မာများ ရှိပါသည်။
ကျွန်တော့်ရာထူးမှာ ဘာတဲ့ သူတို့ပြောတာ Story Writer ဆိုလား။ သို့သော် QC ဖြစ်ပါသည်။ Paper Work များ လုပ်ရ၏။ သြော်မေ့လို့။ ရန်ကုန်တုံးက အေးဂျင့်က IPA စာရွက်ထုတ်ပေးတော့ ကျွန်တော့် position ကို welder ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ဟိုက်၊ အဲဒါမှ ဒုက္ခ ဟု ဒေါ်အိုင်းရစ်ကို သွားမေးရသည်။ လုပ်ပါဦးဗျာ။ အင်တာဗျူးတုံးက ကျွန်တော် welder နဲ့ ဗျူးတာလည်း မဟုတ်ရပါလား။ နောက်ပြီး ကျွန်တော် welding လည်း မဆော်တတ်ဘူးနော် ဆိုတော့ ဒေါ်အိုင်းရစ်က သြော် - ဦးအေးငြိမ်းနှယ်၊ အင်ဂျင်နီယာကို work permit နဲ့ တင်လို့မရဘူး။ အဲဒါကြောင့် welder လုပ်လိုက်ရတာ။ welding လည်းမဆော်ရပါဘူး။ စိတ်ချပါ ဟု ပြောမှ စိတ်အေးရသည်။ ကျွန်တော် တုံးပုံ ပြောပါတယ်။ အဲသည်အချိန်တုံးက work permit ဆိုတာဘာ၊ EP ဆိုတာဘာ။ ကျွန်တော် ဘာမှ မသိပါ။
သည်တုံးက Tellus တွင် QC သိပ်များများစားစားမရှိ။ ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက် QCV (သူ့နာမည်မှာ Wee Ching Tuan ဖြစ်သော်လည်း အများကမူ QCV ဟုခေါ်ပါသည်။) ဆိုသော တရုတ်ကလေး၊ နောက်တစ်ဦးမှာ Elias ဆိုသော ကုလားကလေး, နောက် Munic ဆိုသည့် ကုလားကြီး ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့မှာ အတန်းပညာ သိပ်မတတ်ကြပါ။ သည်လိုပဲ လုပ်ရင်းကိုင်ရင်း ဖြစ်လာကြသူများ ဖြစ်၏။ Elias က လူလည်။ ဟိုစပ်စပ်၊ သည်စပ်စပ်၊ အကုန်ပါသည်။ သည်တော့ သူဌေးက သိပ်သဘောကျသည်။ တယ်တော်တဲ့ကောင် ဟု မကြာခဏ ချီးမွမ်းသံကြားရ၏။ ကျွန်တော်တို့အသုတ်ထဲမှ QC လုပ်ရသူမှာ ကျွန်တော်နှင့် ကိုဇော်ဟိန်းထွန်း ဖြစ်ပါသည်။
သင်္ဘောဆိုတာ ကျွန်တော်မြင်ဖူးသည်မှာ ဟင်္သာတမှ သာရဝေါသို့ကူးသော နှစ်ထပ်သင်္ဘော၊ ပုသိမ်မှ ရန်ကုန်သို့သွားသော ဗန္ဓုလ၊ ဗန္ဓက သင်္ဘောကြီးများနှင့် နောက်ဆုံး ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောဆို၍ ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောများကို အကြီးဆုံးထား မြင်ဖူးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့တိုင် အဝေးမှသာ မြင်ဖူးခြင်းဖြစ်ပြီး သင်္ဘောဝမ်းများအတွင်း တစ်ခါမှ ၀င်ဖူးခြင်းမရှိ။ ရန်ကုန်သို့ အသွားအပြန် ဟင်္သာတ - သာရဝေါ မြစ်ကူး သင်္ဘောများကို စီးဖူးသည်။ အစ်ကိုကြီး ၀ါးခယ်မတွင် တာဝန်ကျစဉ် သူ့ဆီအလည်သွားတော့ ပုသိမ်သင်္ဘောများကို စီးဖူးသည်။ သင်္ဘောဗဟုသုတဆို၍ သည်မျှသာရှိသည်။ သည့်ထက်မပို။
စင်ကာပူရောက်၍ Keppel သင်္ဘောကျင်းတွင် ဧရာမသင်္ဘောကြီးများကိုတွေ့လိုက်ရတော့ အလွန်အံ့သြတမော ဖြစ်ရသည်။ ကျွန်တော် အကြီးဆုံးထားမြင်ဖူးခဲ့သည့် ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောများမှာ ထို FPSO သင်္ဘောကြီးများဘေးတွင် ယှဉ်ရပ်လိုက်တော့ ဆင်ကြီးများ ဘေးတွင် ယှဉ်ရပ်နေသည့် ဆိတ်ကလေးများပမာ ဖြစ်သွားတော့သည်။ ထိုသင်္ဘောကြီးများမှ Tank များအတွင်း တစ်နေ့လျှင် သုံးလေးခါ အတက်အဆင်းလုပ်လိုက်ရလျှင်ပင် မြန်မာပြည်တွင် ကျောင်းဆရာလုပ်ခဲ့သည်၏ တစ်နှစ်စာမျှ ပင်ပန်းသွားတော့သည်။ မှတ်မိသရွေ့ ပြောရလျှင် စင်ကာပူတွင် လုပ်ခဲ့ရသမျှ ၁၂ နှစ်တာကာလများအနက် အပင်ပန်းဆုံးကာလများပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
(၈) စင်ကာပူရောက်စ ဘ၀ အတွေ့အကြုံများ
စင်ကာပူသို့စရောက်ပါပြီဆိုကတည်းက ကျွန်တော်နားရက်မရှိပဲ တစ်ပတ်လျှင် ခုနစ်ရက်လုံး အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်မှာ ခြောက်လ ကျော်ပါသည်။ အလုပ်ချိန်မှာ တနင်္လာမှ သောကြာထိ ရုံးဖွင့်ရက်များတွင် ပုံမှန်အလုပ်ချိန် နံနက် ၇ နာရီခွဲမှ ညနေ ၄နာရီခွဲ၊ သို့သော် ကျွန်တော်တို့မှာ နေ့တိုင်း အိုဗာတိုင်ဆင်းရသဖြင့် ညနေ ၆ နာရီခွဲထိ၊ အလုပ်များလျှင် ည ၁၀ နာရီထိ။ စနေနေ့တွင် များသောအားဖြင့် နံနက် ၇ နာရီခွဲမှ ညနေ လေးနာရီခွဲထိ။ တနင်္ဂနွေ လုပ်ချိန်မှာလည်း စနေနေ့နှင့်အတူတူပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်က အေးဂျင့်ဖီးကို ၆ ကျပ်တိုးနှင့်ယူလာတာဆိုတော့ သည်အကြွေးများကျေသွားဘို့ အရေးကြီးသည်။ သည်တော့ ဆင်းလို့ရသမျှ အကုန်ဆင်းသည်။ Sunday သော Public Holiday သော ဘာမှမရှောင်။ Sunday နှင့် Public holiday ဆင်းရတာကတော့ အတော့်ကို တန်သည်။ နှစ်ဆရသည်ကိုး။
ကြွေးဟု ဆိုရာတွင် အေးဂျင့်ဖီးတင်သာမက ရေဆင်းတွင်နေစဉ်က တင်ခဲ့သော ကြွေးများ၊ စင်ကာပူလာခါနီး တိုလီမုတ်စ၀ယ်ရန် နှင့် အိမ်အသုံးစရိတ်အတွက် သူငယ်ချင်းများထံမှ ချေးထားသည့် ကြွေးများ စသည်တို့ ပါပါသည်။ အေးဂျင့်ဖီးကျေရန် ၆ လမျှ ဆပ်လိုက် ရသည်။ ရသည့်လခကလေးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ကာ အသုံးစရိတ်ကို အနည်းဆုံးသို့လျှော့ချလျှက် ကျန်ပိုက်ဆံအားလုံး အိမ်သို့ ပို့ရ၏။ သည်ပိုက်ဆံနှင့် အိမ်အသုံးစရိတ်ထဲလည်းထည့်၊ အိမ်လခလည်းပေး၊ အတိုးလည်းဆပ်၊ ပိုသည့်ပိုက်ဆံကို အရင်းကိုပါ ဖဲ့ဆပ် စသဖြင့် လုပ်ရသည်။
ကြွေးအားလုံးကိုမူ တစ်နှစ်ကျော်မျှ ဆပ်လိုက်ရပါသည်။ ကျွန်တော်တွက်ကြည့်ရာ ဆပ်လိုက်ရသော ကြွေး တိုးရင်းပေါင်း ၁၃ သိန်းခွဲ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစဉ်က ပိုက်ဆံဈေးမှာ စင်ကာပူ တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၉၅ ကျပ်ဈေးမျှ ရှိသေးရာ သည်ခေတ်နှင့်တွက်မည်ဆိုပါက သိန်း ၅၀ နီးပါးမျှဖြစ်ပါသည်။ သိပ်မနည်းလှပါ။ ကျွန်တော်က အတိုးနှင့်ချေးလာသော ပိုက်ဆံကိုသာမက၊ သူငယ်ချင်းများထံမှ ချေးလာသော ပိုက်ဆံများ၊ ရေဆင်းတွင် ကျန်ခဲ့သောကြွေးများကိုပါ အတိုးနှင့်ပြန်ဆပ်ရန် မမကို မှာလိုက်ပါသည်။ သို့သော် သူငယ်ချင်းများက အတိုးကို လက်မခံပါ။ အရင်းကိုသာ ယူပါသည်။
ရသောလခမှာ တစ်နာရီလျှင် သုံးကျပ် ဖြစ်ပါ၏။ (တစ်နေ့လျှင် ၂၄ ကျပ်)။ လခကို ၁၅ ရက်လျှင် တစ်ကြိမ်ထုတ်ပေးပါသည်။ ကျွန်တော့်စာရင်းများအရ လခတစ်ခါထုတ်လျှင် (အိုဗာတိုင်နည်းလျှင်) ၃၉၀ မှ (အိုဗာတိုင်ကောင်းလျှင်) ၅၃၀ ထိ ထုတ်ရပါသည်။ တစ်လလျှင် ပျမ်းမျှ ၁၀၀၀ ၀န်းကျင်ရပါသည်။ မဆိုးလှ ဟု ဆိုနိုင်ပါ၏။ သည်တုံးက ကျွန်တော့်တစ်လ အသုံးစရိတ်မှာ ၇၀ မှ ၉၀။ တစ်ခါတစ်လေ ၁၂၀ မှ ၁၅၀။ အများဆုံး ကုန်ဖူးတာဆို၍ ၂၀၀ မျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ၂၀၀ သည်ပင် အိမ်အတွက် ပစ္စည်းများဝယ်တာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့် ကိုယ်တိုင်အသုံးစရိတ်မှာ ၁၂၀ ထက် မပိုပါ။ ၂ နှစ်စာ လုပ်အားခထဲမှ အများဆုံး သုံးလိုက်ရတာ ဆို၍ မြန်မာသံရုံး သို့ ဆောင်လိုက်ရသော income tax စင်ကာပူဒေါ်လာ ၉၀၀ နှင့် ပတ်စ်ပို့စာအုပ် သက်တမ်းတိုးခ ၃၀၈ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်နှစ်လုပ်ခ ရသောပိုက်ဆံစုစုပေါင်းမှာ စင်ကာပူဒေါ်လာ နှစ်သောင်း တစ်ထောင်ခုနစ်ရာ ဖြစ်ပါသည်။
တစ်လကို ၇၀ လောက်နဲ့ ဘယ်လိုများ သုံးလိုက်ပါလိမ့် ဟု မအံ့သြပါနှင့်။ အထက်တွင် ပြောခဲ့သလို ကျွန်တော့်မှာ နေ့တိုင်းအလုပ် ဆင်းနေသည်ဖြစ်ရာ အပြင်ထွက်လည်လို့မရ။ ကားခ၊ ရထားခ မကုန်။ အပိုသုံးစရာ ဘာမှမရှိ။ ထမင်းကလည်း ချက်စားသည်ဖြစ်ရာ သိပ် မကုန်လှ။ အခန်းခကို ကုမ္ပဏီမှပေးသည်။ ရေဘိုး၊ မီးဘိုးလည်း ရောက်စ ၂ လတွင် ပေးစရာမလို။ အလုပ်သွား အလုပ်ပြန်ကလည်း ကုမ္ပဏီမှ လော်ရီနှင့် ကြိုပို့တာဆိုတော့ ဘာဆိုဘာမှ မကုန်။ သို့အတွက် ထမင်းစရိတ်နှင့် သွားတိုက်ဆေး၊ ဆပ်ပြာဘိုးတို့လောက်သာ ကုန်သည်။ သည်တုံးက အိမ်တွင် ဖုံးမရှိ။ အနီးအနားတွင်လည်း မရှိ။ အိမ်သို့ဆက်သွယ်စရာ စာတိုက်ကနေ စာပို့လို့ပဲရသည်။ သည်တော့ တံဆိပ်ခေါင်းဖိုး ၆၅ ပြားပဲကုန်သည်။ တစ်လမှ တစ်ခါလောက် စာထည့်တာဆိုတော့ ပြောပလောက်စရာမဟုတ်။ သည်တော့ တစ်လ ၁၀၀ ဆိုလျှင်ပင် တိန်တိန်မြည်အောင် သုံးနိုင်သည်။ နောက်ပြီး ခုလို ဈေးများကလည်း သိပ်မကြီးလှသေး။ Keppel Shipyard မှ ကန်တင်းတွင် ထမင်းဝယ်စားလျှင်ပင် ဟင်းသုံးမျိုးနှင့်မှ ၂ ကျပ်ပဲ ဖြစ်ပါ၏။ တန်မှတန်။
ပထမလအတွင်း ဘတ်စ်ကား၊ ရထားများပင် မစီးဖူးပါ။ တစ်လကျော်လာတော့ ယခင်က စင်ကာပူတွင် နှစ်နှစ်လုပ်ဖူးသူ ဦးဘကျော် နှင့် ကိုမြင့်လွင်က ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားကို ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုက်ပို့မယ် ဟု ဆိုပါသည်။ သည်တုံးက စင်ကာပူတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလည်း များများစားစားမရှိ။ ကျွန်တော်မှတ်မိသရွေ့ဆိုလျှင် တိုပါးရိုးကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းထဲသာ ဖြစ်ပါသည်။ ပထမ တက္ကစီငှားကာ Raffel City သို့ သွားပါသည်။ သည်အထိ ချောချောမွေ့မွေ့။ ပင်နင်စူလာတွင်လည်း မြန်မာဆိုင် သိပ်များများစားစား မရှိ။ သုံးထပ်တွင်သာ ဆိုင်အချို့ ရှိပါသည်။ ပင်နင်စူလာတွင် လျှောက်ကြည့်ကြပြီးနောက် ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ခရီးဆက်ခဲ့ကြပါသည်။
ပထမ MRT နှင့် တိုပါးရိုးဘူတာ လာကာ ထိုမှတစ်ဆင့် ဘတ်စ်အင်တာချိန်း သို့လာပါသည်။ သည်တုံးက ဘတ်စ်အင်တာချိန်းမှာ ယခု ပန်းခြံလုပ်ထားသောနေရာတွင် ဖြစ်၏။ ဘတ်စ်အင်တာချိန်းမှ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို လှမ်းမြင်နေရပါသည်။ သို့အတွက် မြင်နေရသော ကျောင်းရှိရာ တည့်တည့်ဘက်သို့ ဘတ်စ်အင်တာချိန်းကိုကျော်ကာ ပန်းခြုံများကို တိုးဝှေ့ထွက်လိုက်တော့ ကားပေါင်း မြောက်များစွာ ပြေးနေသော လမ်းမကြီး အကြီးကြီးကို ဘွားကနဲတွေ့လိုက်ရပါသည်။ ကားလမ်းမကြီးဘေးတွင် ရေမြောင်းကြီးရှိကာ ထိုရေမြောင်းကြီးနှင့် ကားလမ်းမကြီးကို သံဘားတန်းကြီးများဖြင့် စည်းခြားထားပါသည်။ ကိုယ်တော်တို့က ပန်းရုံများကို အတင်းတိုးရုံမက ရေမြောင်းကြီးကိုလည်း ခုန်ကျော်။ နောက် သံဘားတန်းကြီးကို မရမက ခွကျော်ကာ ကားများဥဒဟိုပြေးနေသော ကားလမ်းမကြီးကို အတင်းဖြတ်ကျော်ရန် ကြိုးစားကြပါတော့သည်။ ကျွန်တော်လည်း ဘုမသိ ဘမသိ သူတို့နောက်က ဘိုသီဘတ်သီနှင့် ဒရောသောပါး လိုက်ခဲ့ရ၏။
ကားများမှာ အလွန်များပြားလှရကား သည်ကားလမ်းမကြီးကို ဘယ်လိုများဖြတ်မှာပါလိမ့် ဟု ကျွန်တော့်မှာ မစဉ်းစားတတ်အောင် ပင် ဖြစ်နေပါသည်။ တော်တော်ကြာတော့ ကံအားလျော်စွာ ထိုကားလမ်းမကြီးအတိုင်း ဘေးမှလျှောက်လာသော မြန်မာတစ်သိုက်နှင့် တွေ့ပါ သည်။ ကျွန်တော့်ဆရာကြီးများ ကားလမ်းကို အတင်းရော၊ အဓမ္မပါ ကူးမည်လုပ်နေတာတွေ့ရတော့ ထိုသူတို့က ဟေ့လူတွေ၊ အဲဒီက မကူးနဲ့၊ သေကုန်လိမ့်မယ်။ ဟိုမှာ လူကူးတံတားရှိတယ် ဆိုမှ သူတို့နောက် လိုက်သွားရပါတော့သည်။ ထိုအခါမှ ကျွန်ုပ်လည်း သက်ပြင်းချနိုင်ပါတော့၏။ ကျွန်တော်တို့လူသိုက် ဖြတ်ကူးရန် ကြိုးစားခဲ့သော ထိုလမ်းမကြီးကား PIE Expressway ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုက်ဝေးလမ်းမကြီးများဟူသည် မီးပွိုင့်မရှိ၊ ဘာမရှိပဲ ကားများမှာ တစ်နာရီလျှင် ကီလို ၉၀ - ၁၀၀ မောင်းနေကြသည်ဖြစ်ရာ ကျေးဇူးရှင် ကိုရွှေမြန်မာအုပ်စုနှင့်သာ မတိုးခဲ့ပါက ယခုလောက်ရှိ ကျွန်တော်တို့မှာ တာဝတိံသာနတ်ပြည်တွင် နတ်သမီးကလေးများနှင့် စံမြန်းနေရ လောက်ပြီ ထင်ပါသည်။
တစ်နေ့သောအခါတွင်မူ အိမ်မှ register လုပ်ထားသော စာတစ်စောင် ရောက်လာပါသည်။ မှတ်ပုံတင်စာတို့မည်သည် လူကိုယ်တိုင်မတွေ့လျှင် စာတိုက်သို့သွားရွေးရရာ ကျွန်တော့်မှာ စာတိုက်ကို မနည်းလိုက်ရှာရပါသည်။ စာတိုက်မှာ Yishun ဘူတာဟိုးဘက် တိုက်တန်းလျားလေးများတွင်ရှိရာ ရှာရင်းလျှောက်ရင်း၊ လျှောက်ရင်းရှာရင်းနှင့်ပင် စာတိုက်သို့ရောက်သွားပါသည်။ စာတိုက်တံဆိပ် တွေ့သည်နှင့် စာတိုက်ရုံးမှန်းတော့ သိပြီ။ သို့သော် ဂွကျသည်မှာ တံခါးများပိတ်ထား၏။ အတွင်းကိုချောင်းကြည့်တော့ လူများ ရှုပ်ရှက်ခပ် နေသဖြင့် စာတိုက်ဖွင့်တာ သေချာသည်။ လုံခြုံရေးအတွက် တံခါးများ ပိတ်ထားတာထင်ပြီး ကျွန်တော် တံခါးကို ခေါက်လိုက်၏။ ပထမ သုံးလေးချက်တွင် သူတို့မကြား။ နောက် ခပ်ပြင်းပြင်းကလေးခေါက်လိုက်မှ တစ်ယောက်ရောက်လာပြီး နောက်ဘက်မှ ပတ်လာရန် လက်ဖြင့် ပြသည်။ လားလား စာတိုက်ကို ကျွန်တော် နောက်ဘက်မှ ရောက်သွားတာဖြစ်နေပါတော့သည်။ ကြုံရပုံများတော့ မပြောချင်ပါ။
ဤအိမ်တွင် သိပ်မကြာလိုက်။ နှစ်လလောက်နေတော့ အလုပ်ဆင်းရမည့် Keppel Shipyard နှင့်ပိုနီးသော Jurong West ရှိ Jurong View Apartment သို့ ပြောင်းခဲ့ရပါတော့သတည်း။
sincere, interesting and informative.
ကျွန်တော်တို့အတွက် သမိုင်းရာဇ၀င်တွေပါပဲ .. ကိုအေးငြိမ်းရေ..